Vanofanira Kutengesa Matimu Blog? | Martech Zone
Chishanu, July 6, 2012 Svondo, Gunyana 8, 2013 Douglas Karr
Ini zvakaitika kuti ndivone mhinduro kubva KutengesaPower uye ndingangoita sitiroko pandakaona mhedzisiro. Mubvunzo ndewokuti Vanofanira Kutengesa Matimu Blog? Heino mhedzisiro:
Uri kundirova here? 55.11% yemakambani kurambidza avo vatengesi vanhu kublogi? Chekutanga pane zvese… kana zviri izvo nekambani yandiri kufunga kuita nayo bhizinesi, izvo zvakakwana kuti ndichinje pfungwa dzangu. Heino chikonzero:
kuvimbika - Zviripo, izvi zvinoreva kuti vatengesi havagone kuvimbwa kuti vataure pamhepo. Uye kana zvirizvo, vangangove vasingataure vakatendeseka pasiri pamhepo.
Positioning - Dai paive neboka revanhu mukati mesangano rako rakavakirwa kublog, ndivo vatengesi vako. Vashandi vako vekutengesa vanonzwisisa kumisikidzwa kwechigadzirwa chako, makwikwi ako, simba rako, kusasimba kwako - uye vanonzwisisa maitiro ekugadzirisa mhinduro dzisina kunaka.
Vateereri - Vateereri vako veblog rako tarisiro dzakafanana idzo vatengesi vako varikutaurirana zuva nezuva!
Blog yako mutengesi. Tarisiro iri kushanyira yako blog vachitsvaga mhinduro dzakafanana uye nekutsvagisa nyaya dzakafanana dzavaizoita pavaidaidza mutengesi wako parunhare. Kuvadzivisa hazvina musoro zvachose. Kana iwe usingakwanise kuvimba mutengesi kuti anyore blog blog, haufanire kuvimba navo kuti vataure kune tarisiro.
Ndiri asiri asiri echokwadi, handizvo here? Kana timu yako yekushambadzira iri kugadzira iwo meseji uye ichisundidzira iyo brand, vanhu vanotevera mumutsetse wekuvhara chibvumirano ndivo vatengesi vako. Ini handina njere, ndinoziva kune zvimwe zvinhu zvausingade mutengesi kuti ataure pane yako blog ... kunge badmouthing makwikwi kana kutengesa inotevera hukuru chinhu chiri kubuda ... .
Ichi ndicho chimwe chikonzero chikuru nei madziro pakati pekutengesa nekutengesa achida kuputswa. Ngatibvisei maCMOs uye maVP eSales uye tiende kune Chief Revenue Officer uko mazano anovandudzwa nekuendeswa - uye vanhu vari kuita sarudzo vanozvidavirira pamhedzisiro yemari.
Tags: mukuru wezvekutengesamukuru wemaricmokutengesa bloggingvice purezidhendi wekutengesavp yekutengesa
Jul 11, 2012 pa 11: 01 AM
Kuti upindure kana zvigadzirwa zvekutengesa zvinofanirwa kunge zviri blog, mhinduro yangu yakafemerwa naMeg Ryan mu "When Harry Met Sally." EHE! EHE! EHE!